Wasiir Wasaaradda Howlaha Guud iyo dib U Dhiska Marxuum Cabbaas Cabdullahi Oo Maanta Aas Qaran Loo Sameynayo | Dhamays Media Group
Wasiir Wasaaradda Howlaha Guud iyo dib U Dhiska Marxuum Cabbaas Cabdullahi Oo Maanta Aas Qaran Loo Sameynayo
Muqdisho(Dhamays)_Aas qaran ayaa maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyay wasiirkii wasaaradda Howlaha Guud iyo dib u Dhiska marxuum Cabbaas Cabdullahi Siraaji oo xalay si aan wali sharrxaad buuxda looga bixninin ay askar ka tirsan dowladda tooagsha ugu dileen magaalada Muqdisho.
Madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya ayaa ka qeyb galay Janaasada marxuumka oo lagu qabtay masaajid ku yaalla madaxtooyada.
Waxana aaska ka qeyb galay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed cabdullaahi Farmaajo, Ra'iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo masu'uuliyiin kale.
Image captionMasaajid ku yalla madaxtooyada ayaa salaadda janaasada lagu tukaday
Wuxuu u soo gaabiyay si uu uga qaybgalo aaska loo sameynayo marxuumka.
''Waxaan ku amray hay'adaha ammaanka inay si dhakhse leh baaritaan ugu sameeyaan masiibadan foosha xun. Waana in kuwii ka dambeeyay la horkeenaa caddaaladda'', ayuu madaxweynuhu ku qoray bartiisa Twitter-ka.
Wasiir Siraaji oo sidoo kale ahaa Xildhibaan ka tirsanaa Baarlamaanka Federalka Soomaaliya ayaa laga soo doortay deeganada Jubbaland, isaga oo doorashadii Xildhibaanimada kaga adkaaday wasiir hore
Wasiirkii xalay Muqdisho lagu dilay
Image captionMarxuum Cabbaas Cabdullahi
War qoraal ah oo ka soo baxay Jubbaland ayaa loogu baaqay dowladda Federaalka inay baaritaan baahsan ku sameyso dilkaas, isla markaana la soo bandhigo wixii ka soo baxa baaritaankaas.
Ra'iisal wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo booqday isbitaalka la geeyay meydka wasiirka xalay, ayaa tacsi u diray qoyska uu ka geeriyooday iyo shacabka Soomaaliyeed.
Cabbaas oo 32 sano jir ahaa ayaa la sheegay inuu ahaa wasiirka ugu d'ada yar wasiirada xukumadda cusub. Wuxuu ka mid ahaa qaxootigii ku soo barbaaray xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Image captionWasiirka ayaa la sheegay inuu watay gaariga marka rasaasta lagu furay
Siduu u dhacay dilka wasiirka
Wax badan lagama ogo sida uu dhacay dilka wasiirka. Wasiirka warfaafinta ee dowladda Federaalka Eng. Cabdrixmaan Yariisow ayaa BBC-da u sheegay in askeri saarna agaari ka horeeyay kan uu wasiirka watay uu rasaas ku furay wasiirka. Wuxuu intaasi ku daray in askeriga lagu tuhunsan yahay dilka la soo qabtay uuna socdo baaroitaan ku aadaan sida ay wax u dhaceen.
Taariikh nololeedka marxuumka oo kooban
Wuxuu ku dhashay Afmadow 1985
Waxaa Dhadhaab loola qaxay 1992
Dugsiga sare ayuu Dhadhaab kaga dhameeyay 2005
Jaamacad ayuu Nairobi ka billaabay 2007
Dalka ayuu dib ugu laabtay 2011
Muuqaal ku saabsan dilka wasiir Cabaas
Previous: Daawo Magaaladda Buuhoodle oo Si Xamaasad Leh Loogu Soo Dhaweeyay Wasiir Xaglo Toosiye
Next: Daawo Xukumada Somaliland Oo Kulan Gaara La Qaadatey Waalidiinta Haween Dhalinyaro Qurba Jooga Oo Dhawaan Hargeysa Lagu Qab Qabtey Goob Boodhina